Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Jabhada Xoraynta Shacabka Tigree TPDM oo Bayaan Soosaartay.
Daawo: Jabhada Xoraynta Shacabka Tigree TPDM oo Bayaan Soosaartay.
Bayaan kasoo baxay xafiiska warfaafinta ee Jabahada xoraynta shacabka Tigrey TPDM ayaa shucuubta kala duwan ee lagumaysto loogu baaqay in ay umidoobaan sidii loogu midoobi lahaa ladagaalanka kooxda qowlaysatada ah ee TPLF.
Bayaanka Jabhada xoraynta shacabka Tigrey TPDM kusoo aaday gabagabadii kalfadhigii 2aad ee Jabhada, waxaana bayaanka dhaleecayn balaadhan loogu soo jeediyay kooxda magicii qoomiyada Tigreega halaysay ee TPLF, waxayna Jabhadu kooxda ku wargalisay in lagaadhay xiligii layska qaban lahaa.
Sidoo kale Jabhada TPDM ayaa shucuubta kala duwan ee lagumaysto kacodsatay in aan cadaawad gooni ah looqaadin qoomiyada Tigreega oo iyaduba kamid ah qoomiyadaha lagumaysto, waxayna Jabhadu shucuubta kala duwan ku guubaabisay in halmeel ah looga soo wada jeedsado kooxda budhcad dhuleedka ah ee TPLF.
Sidoo kale bayaanka Jabhada TPDM ayaa lagu sheegay in kooxda TPLF ay samaysay qorshe dabadheer oo qoomiyadaha wadanka wada daga laysku dirayo, waxaana bayaanka lagu codsaday in ay dhamaan qoomiyaduhu ka foojignaadaan hoga dheer ee kooxda TPLF ay uqodayso qoomiyadaha kala duwan.
Bayaanka Jabhada ayaa sidoo kale lagu sheegay in kooxda TPLF ay bi’isay magicii iyo sumcadii wadanka Itoobiya iyo magicii qoomiyada Tigreega oo ay kadhigeen qoomiyad dhiiga shacabka kabeec mushtarta waxaana bayaanka lagu xusay in ay magaca haleeyeen koox yar oo qowlaysato ah.
Ugudambayntii bayaanka Jabhada TPDM ayaa lagu sheegay in kooxda TPLF ay kabaxday balantii ay qaaday ee ahayd in si cadaalad ah ay dadka iyo dalka umaamuli doonaan taas oo beenowday.